अनिता रोजेनथोर्ने - कोभिड - १ V भ्याक्सिन लिनुहोस्
लन्डन। म यहाँ सँधै युद्धको समय बाहेक बसिरहेको छु जब मलाई छ वर्षको लागि खाली गरिएको थियो।
के तपाई हामीलाई आफ्नो बारेमा केहि बढी बताउन सक्नुहुन्छ?
म फेसनमा थिए। म अहिले सेवानिवृत्त छु। म वरिपरि जानको लागि प्रयास गर्छु र आफ्नै काम गर्छु - म कुनै कुनामा बसाउँदिन र आफैंमा दु: ख महसुस गर्दिन। मसँग कहिलेकाँही डाउन डाउन हुन्छ, तर मलाई लाग्छ कि यो एकदम सामान्य छ।
म यहूदी हुँ मेरो परिवार सबै गएका छन् - धन्यबाद मैले एक भाई पाएँ - मेरा काचेज भाइहरू सबै बितिसकेका छ, काकी, काका, त्यहाँ मेरो भाइ बाहेक अरू कोही छैन। मेरो बुबाको परिवार - साथै सबैजना गएका छन त्यसैले यो कहिलेकाँही अलि कम हुन सक्छ।
किन तपाईंले आज खोप लिनुभएको छ?
किनकि म COVID-19 भाइरस पाउनबाट जोगिन चाहान्छु र आशा छ कि यसले मद्दत गर्दछ।
के तपाइँ अरू मानिसहरूलाई यो लिनु पर्छ जस्तो लाग्छ?
हो, म गर्छु। यदि तपाईं गर्नुहुन्न र तपाईं वाहक हुनुहुन्छ भने, तपाईं सजिलैसँग यसलाई अन्य व्यक्तिहरूलाई दिन सक्नुहुन्छ। मेरो लागि यो स्वार्थी मनोवृत्ति हो यदि तपाईंसँग यो गरेको छैन भने। यसले चोट पुर्‍याउँदैन।
← पहिलो खोप डोज पछाडि, मैले के गर्नुपर्छ? डा। हेन्ना अन्वर →